Resume/CV ကောင်းကောင်းဘယ်လိုရေးမလဲ | MyanmarJobsDB
Tags: article, cv, guide, job search, resume
12 Responses to “Resume/CV ကောင်းကောင်းဘယ်လိုရေးမလဲ”
Comment made by Myo Zaw Oo on Aug 22nd 2013 at 6:40 pm: Log in to Reply
I would like to prepare the beautiful CV so please help me how to do this.
Comment made by Ma Wint Thandar Cho on Aug 23rd 2013 at 12:36 pm: Log in to Reply
ထိရောက်မှုရှိသော resumeတစ်ခုရေးသားနိုင်ရန်အထွေထွေလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးကျွနုပ်သည်အင်မတန်သုံးစားမရသောသူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုတွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ဘွဲ့ ရတစ်ယောက်ဖြစ်သောကျွနုပ်ကိုထိုသို့ ညေဖစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ပါသနည်း။အခြားသူမဟုတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးအဆင့်နိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Comment made by Ye Maung Maung on Sep 18th 2013 at 2:09 pm: Log in to Reply
Thanks, Jobs DB!
Comment made by alexkoko on Sep 19th 2013 at 11:45 am: Log in to Reply
Comment made by MyanmarJobsDB on Sep 24th 2013 at 10:57 am: Log in to Reply
ဟုတ်ကဲ့ ရေးပြီးသွားပါပြီ ခင်ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်ပေးပါ။ —> http://www.myanmarjobsdb.com/articles/sample-resume-cv/
Comment made by [email protected] on Nov 15th 2013 at 11:34 am: Log in to Reply
Comment made by MyanmarJobsDB on Dec 13th 2013 at 12:53 pm: Log in to Reply
ဟုတ်ကဲ့ မေ်း ပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။
Comment made by nanhtet19 on Nov 27th 2013 at 5:52 pm: Log in to Reply
ကျွှန်တော့်နာမ်မည်က မောင်နန်းထက် ပါ။ ဘူမိဗေဒနဲ့ကျောင်းပီးထားပါတယ် အသက်က 24 နှစ်ပါ။Myanmar CP Live Stock CO.LTD.., မှာ ၁ နှစ် ၉ လ contract checker အနေ နဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးပါတယ် အခုတော့ လခစား အဖြစ်နဲ့ 
သင့်တော်မယ့်နေ၇ာလေး၇ဖို့ ကြိုးစား၇ှာဖွေ နေပါတယ်။၀င်ေ၇ာက်ကြည့်ရှု့ပီးအချိန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …..
ကျွှန်တော့်ကိုဆက်သွယ်လို့ ၇မယ် လိပ်စာကတော့ 
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီး ၊ စက်မှုဇုံ
09-428335101 or 09-33000024
Comment made by Su Mon on Dec 17th 2013 at 1:02 pm: Log in to Reply
Comment made by moonlady14 on Dec 23rd 2013 at 11:11 pm: Log in to Reply
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့် ဘဏ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ နောက်ပြီး ဘယ်ဘဏ်က ဘယ်သူ့လက်အောက်မှာ ရှိတာလည်း၊ တခြား ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မှတ်ထားရမှာကတော့ ATM, MPU ရဲ့ long term လေးကိုပေါ့၊ နောက်ဆုံး မေးမှာကတော့ ဒီဘဏ်မှာ ဘာကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလည်း လိုတာပေါ့၊ တကယ်လို့ ကိုယ်က အဲ့အပိုင်းမှာ အကယ်လို့ အားနည်းတယ်ဆိုရင် myself လောက်တော့ ပြောနိုင်အောင် ကျင့်ထားဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။ ဒါပါပဲ…. ဘာမှမခက်ပါဘူး။ မကြောက်ပါနဲ့။
PS. ရေးဖြေ puzzle နဲ့ သင်္ချာပိုင်းတွေမှာတော့ နည်းနည်းတော့ ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်။
Comment made by ရှာဖွေသူ on Feb 2nd 2014 at 12:02 pm: Log in to Reply